येशूजस्तै नम्र र कोमल हुनुहोस् | अध्ययन
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इलोको इसोको उज्बेक उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली डच डेनिश ड्रेहु ताजिकी तामिल तेलगु तोक पिसिन थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज मङ्गोलियन मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लाट्भियन लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
“ख्रीष्टले पनि तिमीहरूका निम्ति दुःख भोग्नुभयो र तिमीहरूले राम्ररी उहाँको पदचिन्ह पछ्याओस् भनेर एउटा उदाहरण तिमीहरूका निम्ति छोड्नुभयो।”—१ पत्रु. २:२१.
येशू किन हाम्रो लागि सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ?
तपाईं कसरी येशूजस्तै नम्र हुन सक्नुहुन्छ?
तपाईं कसरी येशूजस्तै कोमल हुन सक्नुहुन्छ?
१. येशूको देखासिकी गर्दा हामी यहोवासित नजिक हुन सक्छौं, किन?
हामी अक्सर आफूलाई मन पर्ने व्यक्तिको काम गर्ने तरिका र व्यक्तित्व नक्कल गर्छौं। यस संसारमा थुप्रै मानिसले पाइला टेके। तर हाम्रो लागि येशू ख्रीष्टले जस्तो राम्रो उदाहरण अरू कसैले पनि बसालेको छैन। किन? किनभने उहाँ आफैले यसो भन्नुभएको छ, “जसले मलाई देखेको छ, उसले बुबालाई पनि देखेको छ।” (यूह. १४:९) येशूले आफ्नो बुबाको व्यक्तित्व हुबहु नक्कल गर्नुभयो। त्यसैले उहाँलाई हेर्नु भनेको बुबालाई हेर्नुजस्तै हो। हामीले येशूको देखासिकी गऱ्यौं भने सबैभन्दा महान्‌ व्यक्ति यहोवासित नजिक हुन सक्छौं। उहाँको छोराका गुणहरू र व्यवहार गर्ने तरिका नक्कल गर्नु साँच्चै लाभदायी छ।
२, ३. (क) यहोवाले धर्मशास्त्रमा येशूबारे किन रेकर्ड गर्न लगाउनुभयो? उहाँ हामीले के गरेको चाहनुहुन्छ? (ख) हामी यो अनि यसपछिको लेखमा के छलफल गर्नेछौं?
२ येशू कस्तो हुनुहुन्छ भनेर हामी कसरी थाह पाउन सक्छौं? बाइबल पढेर। ख्रीष्टियन ग्रीक धर्मशास्त्रमा यहोवाले येशूबारे रेकर्ड गर्न लगाउनुभयो। किन? किनभने हामीले येशूलाई राम्ररी चिनेको र उहाँको देखासिकी गरेको यहोवा चाहनुहुन्छ। (१ पत्रुस २:२१ पढ्नुहोस्) येशूले हाम्रो लागि छोड्नुभएको नमुनालाई बाइबलमा “पदचिन्ह”-सित तुलना गरिएको छ। वास्तवमा, हामीले येशूको पाइला पछ्याएको यहोवाको चाहनुहुन्छ। येशूले हाम्रो लागि उत्कृष्ट उदाहरण बसाल्नुभएको छ। तर हामी त्रुटिपूर्ण भएकोले उहाँको हुबहु नक्कल गर्न सक्दैनौं। यहोवा पनि हामीले येशूको हुबहु नक्कल गरेको आस गर्नुहुन्न। बरु, हामी त्रुटिपूर्ण भए पनि सकेसम्म येशूको देखासिकी गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ।
३ त्यसोभए आउनुहोस्, येशूका केही मनमोहक गुणबारे विचार गरौं। यस लेखमा येशूको नम्रता र कोमलताबारे छलफल गर्नेछौं भने अर्को लेखमा उहाँको साहस र समझदारीबारे केलाउनेछौं। हरेक गुण केलाउँदा हामी तीनवटा प्रश्न विचार गर्नेछौं: यस गुणको अर्थ के हो? येशूले कसरी यो गुण देखाउनुभयो? हामी कसरी उहाँको देखासिकी गर्न सक्छौं?
येशू नम्र हुनुहुन्छ
४. नम्र हुनु भनेको के हो?
४ नम्र हुनु भनेको के हो? संसारका धेरैजसो मानिस घमन्डी छन्‌। त्यसकारण कसै-कसैले नम्र मानिसलाई कमजोर र विश्वस्तताको कमी भएको मानिस भन्छन्‌। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन; नम्र हुन साहस र बल नभई हुँदैन। नम्र हुनु भनेको “घमन्डी वा अहङ्कारी नहुनु” हो। ख्रीष्टियन ग्रीक धर्मशास्त्रमा “विनम्र” हुनु भनेर अनुवाद गरिएको शब्दलाई आफूलाई अरूभन्दा सानो सम्झनु भनेर पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ। (फिलि. २:३) हामी आफूबारे के सोच्छौं, त्यसले नै हामी नम्र छौं कि छैनौं भनेर देखाउँछ। एउटा बाइबल शब्दकोशअनुसार “नम्र हुनु भनेको आफू परमेश्वरसामु तुच्छ छु भनेर मानिलिनु हो।” हामी यहोवासामु साँच्चै नम्र छौं भने आफूलाई अरूभन्दा श्रेष्ठ ठान्दैनौं। (रोमी १२:३) हामी त्रुटिपूर्ण भएकोले नम्र हुन सजिलो छैन। तर आफू यहोवासामु तुच्छ छु भनेर मानिलियौं र उहाँको छोराको पाइला पछ्यायौं भने हामी नम्र हुन सक्छौं।
५, ६. (क) प्रधान दूत माइकल को हो? (ख) माइकलले कसरी नम्र मनोभाव देखाउनुभयो?
५ येशूले सधैं नम्रता देखाउनुभयो। स्वर्गमा शक्तिशाली प्राणीको रूपमा रहँदा र पृथ्वीमा त्रुटिरहित मानिसको रूपमा रहँदा उहाँले यो गुण देखाउनुभयो। त्यसोभए येशूले कुन-कुन तरिकामा नम्रता देखाउनुभयो, केही उदाहरण विचार गरौं।
६ उहाँको मनोभावमा। पृथ्वीमा आउनुअघि येशूले नम्रता देखाउनुभएको एउटा उदाहरण यहूदाले रेकर्ड गरेका छन्‌। (यहूदा ९ पढ्नुहोस्) प्रधान दूत माइकल अर्थात्‌ येशूको “दियाबलसित वाद-विवाद” भएको थियो। यो विवाद “मोशाको शरीर”-को विषयमा थियो। बाइबल विवरण हेर्ने हो भने मोशाको मृत्यु भए पछि यहोवाले तिनको लास कसैलाई थाह नभएको ठाउँमा गाड्नुभएको थियो। (व्यव. ३४:५, ६) दियाबलले झूटो उपासनालाई बढवा दिन मोशाको लास प्रयोग गर्न खोजेको हुन सक्छ। तर त्यसको उद्देश्य जेसुकै भए पनि त्यसको विरुद्धमा खडा भएर येशूले साहस देखाउनुभयो। एउटा स्रोतअनुसार “वाद-विवाद” भनेर अनुवाद गरिएको ग्रीक शब्द “कानुनी बहसलाई बुझाउन पनि प्रयोग गरिन्छ” अनि यो ग्रीक शब्दले “माइकलले मोशाको लास लैजाने ‘दियाबलको अधिकारलाई चुनौती दिंदै हुनुहुन्थ्यो’” भन्ने कुरा बुझाएको हुन सक्छ। तर प्रधान दूतले आफूसित न्याय गर्ने अधिकार छैन भनेर बुझ्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँले त्यो मुद्दा प्रधान न्यायाधीश यहोवाको हातमा छोडिदिनुभयो। यसरी माइकलले आवेशमा आएर आफ्नो अधिकारमै नभएको काम गर्नुभएन। कस्तो नम्र मनोभाव!
७. येशूले आफ्नो बोली र कामबाट आफू नम्र भएको कसरी देखाउनुभयो?
७ पृथ्वीमा हुँदा पनि येशूले आफ्नो बोली र कामबाट आफू नम्र भएको देखाउनुभयो। उहाँको बोलीमा। उहाँले कहिल्यै मानिसहरूको ध्यान आफूतर्फ खिच्नुभएन। बरु उहाँले आफ्नो होइन, आफ्नो बुबा यहोवाको महिमा होस् भन्ने चाहनुभयो। (मर्कू. १०:१७, १८; यूह. ७:१६) उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई होच्याउनुभएन। बरु तिनीहरूमा भएका असल गुणहरूको लागि प्रशंसा गरेर अनि तिनीहरूलाई भरोसा गरेको कुरा व्यक्त गरेर तिनीहरूको आदर गर्नुभयो। (लूका २२:३१, ३२; यूह. १:४७) उहाँको काममा। येशूले सुविधा-सम्पन्न जीवनशैली रोज्नुको साटो साधारण जीवनशैली रोज्नुभयो। (मत्ती ८:२०) उहाँले मानिसहरूको नजरमा तुच्छ देखिने कामसमेत गर्नुभयो। (यूह. १३:३-१५) यहोवाप्रति आज्ञाकारी भएर पनि उहाँले नम्रताको उत्कृष्ट उदाहरण बसाल्नुभयो। (फिलिप्पी २:५-८ पढ्नुहोस्) येशू अधीनमा बस्न नचाहने घमन्डी मानिसहरूजस्तो हुनुहुन्नथ्यो। उहाँ “मृत्युसम्मै आज्ञाकारी” भएर यहोवाले अह्राउनुभएको काम गर्नुभयो। येशू “नम्र मनको” हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन र?—मत्ती ११:२९.
येशूजस्तै नम्र हुनुहोस्
८, ९. हामी नम्र छौं भनेर कसरी देखाउन सक्छौं?
८ हामी कसरी येशूजस्तै नम्र हुन सक्छौं? हाम्रो मनोभावमा। हामी नम्र छौं भने आफ्नो अधिकारमा नभएको कुनै पनि काम गर्नेछैनौं। हामीसित अरूको न्याय गर्ने अधिकार छैन भनेर मानिलिन्छौं भने अरूले गल्ती गर्दा निन्दा गर्नेछैनौं र तिनीहरूको मनसायमा शङ्का गर्नेछैनौं। (लूका ६:३७; याकू. ४:१२) अरूसित नभएको क्षमता हामीसित छ होला वा हामीले कुनै विशेष जिम्मेवारी पाएका छौं होला। तर नम्र छौं भने हामी “ज्यादै धर्मी” भएर अरूलाई होच्याउनेछैनौं। (उप. ७:१६) एल्डरहरू नम्र छन्‌ भने तिनीहरू मण्डलीका सदस्यहरूलाई “आफूभन्दा श्रेष्ठ” ठान्छन्‌ र आफूलाई अरूभन्दा सानो सम्झेर व्यवहार गर्छन्‌।—फिलि. २:३; लूका ९:४८.
९ वाल्टर जे. थर्नलाई विचार गरौं। उहाँले १८९४ देखि परिभ्रमण निरीक्षकको रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो। थुप्रै वर्ष परिभ्रमण निरीक्षकको रूपमा काम गरेपछि उहाँलाई न्यु योर्कमा बोलाइयो। त्यहाँ उहाँले बेथेल परिवारको लागि खेतीपाती र पशुपालन गरिने ठाउँमा (किङ्डम फार्म) कुखुराको रेखदेख गर्ने नयाँ जिम्मेवारी पाउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, “जब म आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी ठान्न थाल्छु, तब एउटा कुनामा गएर आफैलाई यसो भन्छु, ‘तँ धूलोको सानो कण! आखिर तँसँग घमन्ड गर्ने के कारण छ र?’” (यशैया ४०:१२-१५ पढ्नुहोस्) कस्तो नम्र मनोभाव!
१०. आफ्नो बोली र काममा कसरी नम्रता देखाउन सक्छौं?
१० हाम्रो बोलीमा। हामी नम्र मनको छौं भने हाम्रो बोलीमा नम्रता झल्किन्छ। (लूका ६:४५) अरूसित कुराकानी गर्दा हामी आफ्नो उपलब्धि र सुअवसरको मात्र बखान गर्नेछैनौं। (हितो. २७:२) त्यसको सट्टा हामी अरूमा भएको असल कुरा हेर्नेछौं र तिनीहरूमा भएको राम्रा गुण, क्षमता अनि तिनीहरूले पाएको सफलताको लागि प्रशंसा गर्नेछौं। (हितो. १५:२३) हाम्रो काममा। नम्र ख्रीष्टियनहरू यस संसारमा नाम कमाउन खोज्दैनन्‌। बरु यहोवाको भक्ति गर्ने काममा धेरै समय बिताउन सकियोस् भनेर तिनीहरू जीवन सरल बनाउँछन्‌; मानिसको नजरमा साधारण देखिने काम गर्नसमेत तयार हुन्छन्‌। (१ तिमो. ६:६, ८) हामी आज्ञाकारी भएर पनि नम्रता देखाउन सक्छौं। हामीमा नम्र मनोभाव छ भने मात्र मण्डलीमा ‘अगुवाइ लिइरहेकाहरूप्रति आज्ञाकारी’ हुन सक्छौं अनि यहोवाको सङ्गठनबाट आएको निर्देशनअनुसार चल्न सक्छौं।—हिब्रू १३:१७.
येशू कोमल हुनुहुन्छ
११. कोमल हुनुको अर्थ बुझाउनुहोस्।
११ कोमल हुनु भनेको के हो? कोमल हुनु भनेको अरूको पीडा महसुस गर्नु र उनीहरूको पीडा कम गर्न आफ्नो तर्फबाट पनि केही गर्नु हो। कोमलता भन्ने गुण प्रेमको एउटा पक्ष हो अनि यस गुणमा करुणा र कृपाजस्ता गुणहरू पनि झल्किन्छन्‌। बाइबलमा “कोमल करुणा”, “कोमल कृपा” र “कोमल स्नेह”-जस्ता पदावलीहरू चलाइएको छ। (लूका १:७८; २ कोरि. १:३; फिलि. १:८) बाइबलले हामीलाई कोमल हुन आग्रह गर्नुको अर्थ के हो, त्यसबारे बाइबलको एउटा सन्दर्भ सामाग्री यसो भन्छ, “कोमल हुनु भनेको अरूको दुःख महसुस गर्नु मात्र होइन। बरु अरूको दुःखमा साथ दिनु र तिनीहरूको दुःख हटाउन कदम चाल्नु हो। यसो गर्दा तिनीहरूको जीवनले नयाँ मोड लिनेछ।” कोमलताले हामीलाई केही गर्न उत्प्रेरित गर्छ। कोमलताले भरिएको मानिस अरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न उत्सुक हुन्छ।
१२. मानिसहरूलाई देखेर येशू टिठाउनुभयो भनेर किन भन्न सक्छौं? कोमलताले उहाँलाई के गर्न उत्प्रेरित गऱ्यो?
१२ येशूले कसरी कोमलता देखाउनुभयो? उहाँको भावना र काममा कोमलता झल्किन्थ्यो। मानिसहरूको अवस्था देखेर येशू टिठाउनुहुन्थ्यो। लाजरसको मृत्यु हुँदा येशूले मरियम र अरू मानिस रोइरहेका देख्नुभयो। यो देखेर “येशू रुनुभयो।” (यूहन्ना ११:३२-३५ पढ्नुहोस्) यसअघि विधवाको छोरालाई ब्यूँताउँदा येशू टिठाउनुभएजस्तै यतिबेला पनि उहाँ टिठाउनुभयो र लाजरसलाई ब्यूँताउनुभयो। (लूका ७:११-१५; यूह. ११:३८-४४) येशूले देखाउनुभएको कोमलताले गर्दा लाजरस सर्वगमा जाने सुअवसर पाउनेहरूमध्ये भएको हुन सक्छ। यसअघिको एउटा घटनालाई पनि विचार गरौं। उहाँको कुरा सुन्न आएको ठूलो भीड देखेर येशू “टिठाउनुभयो” अनि “तिनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाउन थाल्नुभयो।” (मर्कू. ६:३४) उहाँको शिक्षाअनुसार चल्नेहरूको जीवनमा पक्कै पनि आमूल परिवर्तन आयो। येशूको कोमलता भावनामा मात्र सीमित थिएन। मानिसहरूलाई मदत गर्न यही गुणले उहाँलाई उत्प्रेरित गऱ्यो।—मत्ती १५:३२-३८; २०:२९-३४; मर्कू. १:४०-४२.
१३. येशूका शब्दहरूमा कोमलता झल्किन्थ्यो भनेर किन भन्न सक्छौं? (शीर्षकमाथिको चित्र हेर्नुहोस्)
१३ उहाँको बोलीमा कोमलता झल्किन्थ्यो। येशू कोमल मनको हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अरूसित, विशेषगरि दुःखमा परेकाहरूसित कोमल भावसहित कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँबारे यशैयाले भनेका कुरा प्रेषित मत्तीले यसरी उल्लेख गरे, “न तिनले फुटेको नर्कट भाँच्नेछन्‌, न त धिपधिप बलिरहेको सलेदो निभाउनेछन्‌।” (यशै. ४२:३; मत्ती १२:२०) यस पदमा दुःखमा परेका मानिसहरूलाई लाक्षणिक अर्थमा फुटेको नर्कट र निभ्न लागेको सलेदो भनिएको छ। येशूका शब्दहरूले त्यस्ता मानिसहरूलाई सान्त्वना दियो। “मन भाँचिएकाहरूको हृदयलाई निको” पार्न उहाँले आशाको सन्देश बाँड्नुभयो। (यशै. ६१:१) “कठोर श्रमले थाकेका र भारले दबिएका सबै मानिसहरू”-लाई आफूकहाँ आउन येशूले आग्रह गर्नुभयो र तिनीहरूलाई “स्फूर्ति” दिने प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो। (मत्ती ११:२८-३०) परमेश्वर आफ्ना प्रत्येक सेवकहरूको धेरै ख्याल राख्नुहुन्छ र संसारका मानिसहरूको नजरमा “साना”-जस्तो देखिनेहरू पनि उहाँको नजरमा अमूल्य छन्‌ भनेर येशूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई विश्वस्त पार्नुभयो।—मत्ती १८:१२-१४; लूका १२:६, ७.
येशूजस्तै कोमल हुनुहोस्
१४. हामी कसरी अरूप्रति समानुभूति देखाउन सक्छौं?
१४ हामी कसरी येशूजस्तै कोमल हुन सक्छौं? हामीले अरूप्रति समानुभूति देखाउनुपर्छ। यस्तो भावना आफसेआफ आउँदैन; बाइबलले बताएअनुसार हामीले यस्तो भावना विकास गर्नुपर्छ। सबै ख्रीष्टियनले धारण गर्नुपर्ने नयाँ व्यक्तित्वको एउटा पक्ष “कोमल करुणा” हो। (कलस्सी ३:९, १०, १२ पढ्नुहोस्) तपाईं कसरी अरूप्रति समानुभूति देखाउन सक्नुहुन्छ? ठूलो मनको भएर। (२ कोरि. ६:११-१३) कसैले आफ्नो भावना र दुःख पोखाउँदा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। (याकू. १:१९) आफैलाई यस्तो प्रश्न सोध्नुहोस्, “म पनि त्यस्तै परिस्थितिमा भएको भए के गर्थें? त्यतिबेला अरूबाट कस्तो आस गर्थें?”—१ पत्रु. ३:८.
१५. दुःखमा परेका मानिसहरूलाई हामी कसरी मदत गर्न सक्छौं?
१५ हाम्रो काममा कोमलता झल्किनुपर्छ। कोमलताले हामीलाई अरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न मदत गर्छ, विशेषगरि दुःखमा परेका मानिसहरूको जीवनमा। यस्ता मानिसहरूलाई कसरी मदत गर्न सक्छौं? रोमी १२:१५ ले “रुने मानिसहरूसित रोओ” भन्छ। मन भाँचिएकाहरूलाई अर्ति-उपदेश दिनुभन्दा आफूलाई तिनीहरूको ठाउँमा राखेर तिनीहरूको पीडा महसुस गर्नु आवश्यक छ। तिनीहरूले हामीबाट त्यस्तै आस गरिरहेका हुन सक्छन्‌। छोरीको मृत्यु भएपछि ख्रीष्टियन साथीभाइहरूबाट सान्त्वना पाएकी एक बहिनी यसो भन्छिन्‌, “साथीहरू मलाई भेट्न आएर मसँगै रोइदिंदा मात्र पनि मैले सान्त्वना पाएँ।” अरूलाई मदत गरेर पनि हामी कोमल स्नेह देखाउन सक्छौं। कुनै विधवा बहिनीको घर मर्मत गर्न मदत चाहिएको छ कि? कुनै वृद्ध ख्रीष्टियनलाई सभामा, प्रचारमा वा डाक्टरलाई भेट्न जान साथी चाहिएको पो छ कि? हामीले ख्रीष्टियन दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई गरेको मदत जति नै सानो भए पनि उनीहरूलाई ठूलो राहत मिल्न सक्छ। (१ यूह. ३:१७, १८) कोमल हुने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको सेवाको काममा पूरापूर भाग लिएर हो। असल मन भएका मानिसहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने यो जत्तिको असल काम अरू कुनै पनि छैन।
के तपाईं ख्रीष्टियन दाजुभाइ दिदीबहिनीको ख्याल राख्नुहुन्छ? (अनुच्छेद १५ हेर्नुहोस्)
१६. निराश भएकाहरूलाई सान्त्वना दिन हामी के भन्न सक्छौं?
१६ हाम्रो बोलीमा कोमलता झल्किनुपर्छ। हामीमा कोमल करुणा छ भने “जो निराश छन्‌, तिनीहरूसित सान्त्वनादायी कुरा” गर्नेछौं। (१ थिस्स. ५:१४) निराश भएकाहरूलाई सान्त्वना दिन हामी के भन्न सक्छौं? तिनीहरूको ख्याल गरेको कुरा बताएर हौसला दिन सक्छौं। तिनीहरूको मनैदेखि प्रशंसा गरेर तिनीहरूलाई आफूमा भएको क्षमता र असल गुणहरू हेर्न मदत दिन सक्छौं। तिनीहरू यहोवाको नजरमा अमूल्य भएकोले नै उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो छोरासित नजिक हुन बोलाउनुभएको हो भनेर पनि सम्झाउन सक्छौं। (यूह. ६:४४) यहोवाले “टुटेका हृदय भएकाहरू” वा “पश्‍चातापी मन हुनेहरू”-को ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा तिनीहरूलाई विश्वस्त पार्न सक्छौं। (भज. ३४:१८) हाम्रो बोलीमा कोमलता झल्किन्छ भने त्यसले निराश भएकाहरूका लागि औषधीको काम गर्न सक्छ।—हितो. १६:२४.
१७, १८. (क) एल्डरहरूले बगालप्रति कस्तो व्यवहार गरेको यहोवा चाहनुहुन्छ? (ख) अर्को लेखमा हामी के छलफल गर्नेछौं?
१७ एल्डरहरू हो, तपाईंहरूले बगालप्रति कोमल व्यवहार गरेको यहोवा चाहनुहुन्छ। (प्रेषि. २०:२८, २९) बगाललाई आध्यात्मिक आहारा खुवाउने, प्रोत्साहन दिने र स्फूर्ति दिने जिम्मा तपाईंहरूकै हो भनेर नबिर्सनुहोस्। (यशै. ३२:१, २; १ पत्रु. ५:२-४) त्यसैले कुनै एल्डरमा कोमल करुणा छ भने बगाललाई नियन्त्रण गर्न अनावश्यक नियम बनाउँदैनन्‌ र तिनीहरूको परिस्थितिले नदिने काम गर्न बाध्य पनि पार्दैनन्‌। बरु तिनीहरू यहोवाप्रतिको मायाले गर्दा अझ राम्ररी उहाँको सेवा गर्न जुरमुरिनेछन्‌ भन्ने कुरा एल्डरहरूले मनमा राख्छन्‌ र तिनीहरूलाई आनन्दित हुन मदत गर्छन्‌।—मत्ती २२:३७.
१८ येशूको नम्रता र कोमलताबारे छलफल गरेपछि हामी पक्कै पनि उहाँको पदचिन्ह पछ्याइरहन उत्प्रेरित भएका छौं। अर्को लेखमा येशूको दुइटा मनमोहक गुण साहस र समझदारीबारे छलफल गर्नेछौं।